ဒိုးမယ် - Page 16 of 28 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့ကဆိုရင်တော့ တိုင်းတစ်ပါးသားတို့ရဲ့ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေ လွတ်မြောက်ပြီး လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ်ရ ရှိခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်နန်း လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်ကစပြီး ရပ်တည်လာတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု...
ချိုအီမွှေးနေတဲ့ ပျားရည်လေးက ချိုမြိန်တဲ့အရသာနဲ့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေအများကြီး ပါဝင်တာကြောင့် လူကြိုက်များလှတဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ ပျားရည်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၃၀၀၀ ခန့်က စပြီး ဆေးဝါးဖော်စပ်ရာ နှင့် အလှအပ အတွက် အသုံးပြုခဲ့ ကြပါတယ်။ ပျားအမျိုးအစားနှင့် နေရာဒေသပေါ် မူတည်ပြီး...
နောက် ၃ ရက် ပြီးရင်တော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကြီးကို တာ့တာ Bye Bye ပြပြီး နှစ်သစ် ၂၀၁၈ ကို ကြို ဆိုရမယ့် အချိန်ပါ။ ဘော်ဒါတို့ရေ…New Year ညမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်စားဖို့...
Doemal ရဲ့ Rebate System ဆိုတာဘာလဲ…??? Doemal ရဲ့ Rebate System ဆိုတာကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ကူပွန် ဘောင်ချာတွေနဲ့ လဲလှယ်လို့ရတဲ့ Dinga လေးတွေကို ပြန်လည်ရရှိကာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည် အသုံးပြုလို့ရတဲ့...
ယမကာနဲ႕ အလိုက္ဖက္ဆံုး အျမည္းမ်ား
အရက်ပဲသောက်သောက်၊ ဝိုင်ပဲ သောက်သောက် အမြည်းမပါရင် မပြည့်စုံဘူးလို့ ယမကာ ချစ်သူတွေက ဆိုကြလေ့ရှိကြတယ်။ သံပုရာသီးနဲ့ မြည်းတာကအစ အစားအစာမျိုးစုံနဲ့ မြည်းကြတဲ့ အထဲမှာမှ ယမကာနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး အမြည်းတွေကို ပြောပြပေးမယ်လေ..ကိုယ့်လူတို့။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အမြည်းကရော အလိုက်ဖက်ဆုံး အမြည်းထဲမှာ ပါမလားဆိုတာ...
မကြာခင် ကရင်နှစ်ကူးလည်း ရောက်တော့မှာ ဆိုတော့ ရှုခင်းတွေလည်းလှ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့လည်းကောင်းပြီး ဒေသအစားအစာလေးတွေကလည်း နာမည်ကြီးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့လေးကို စျေးသက်သက်သာသာ နဲ့ သွားလည် ကြရအောင်။ ဘာနဲ့သွားကြမလဲ။ ဘားအံမြို့လေးကတော့ ရန်ကုန်ကနေသွားမယ်ဆိုရင် ၁၇၇ မိုင်အကွာမှာ ရှိတဲ့ လှပတဲ့နယ်မြေလေးတစ်ခုပါ။ ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်...
ဝီစကီ ဆိုတာ ရှေးယခင်ထဲက တော်ဝင် အခမ်းအနားတွေ၊ ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံ ပွဲတော်ရဲ့ မပါမဖြစ် ထိပ်တန်း ယမကာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက် အများဆုံး နဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ထိပ်တန်း ယမကာ တွေထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင်ပါ။...
အလုပ်ရှုပ်တဲ့ အိမ်ရှင်မ တွေ၊ တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ နေတဲ့ ကိုလူပျို၊ မမအပျိုကြီးတွေ ရဲ့ မီးဖိုချောင်မှာတော့ အမြဲရှိတတ်တာကတေ့ာ ကြက်ဥတွေပါ။ အခုလို ပိတ်ရက်မှာ ကြက်ဥတွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြားလုပ်စားလို့ရမယ့် နည်းလေး ဆို သိချင်ကြမလားနော်။ ကြက်ဥ နှင့်...
ကိုရီးယား အစားအစာ ကြိုက်သူတွေအတွက် စမ်းချောင်း ပဒုမ္မာလမ်းထဲမှာ ချန်ဂင်မ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးကလည်း လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုရီးယားဆိုင်လေးပါ။ ချိုချို ပူပူစပ်စပ် တော့ပုကီ၊ ငါးအသားချောင်း၊ ထမင်းသုပ်၊ ကင်မ်ချီ၊ ကိုရီးယား ထမင်းလိပ် စတဲ့ ကိုရီးယားအစားအစာ အစုံရ...
ဟော့ပေါ့နှင့် စီချွမ်မာလာရှမ်းကော ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဆိုင်သစ်လေးပါ။ K & K Hot Pot & Spicy Taste က ဒီတလောအတွင်းမှ ဖွင့်ထားတာဗျ။ စျေးလေးတွေလည်း မဆိုးဘူး ။နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့အထိ...